Andriamanitra dia manambara fahasoavana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny fahasoavan'Andriamanitra > Andriamanitra dia manambara ny fahasoavana
Fahasoavana madio tokoa no hamonjena anao. Tsy misy azonao atao ho an'ny tenanao afa-tsy ny matoky izay omen'Andriamanitra anao. Tsy mendrika izany ianao tamin'ny fanaovana na inona na inona; satria tsy tian’Andriamanitra hisy holazaina eo anatrehany ny zava-bitany (Efes 2,8-9 GN).
Nefa mila mitandrina ihany koa isika! Tsy azontsika atao ny mamela ny zava-poana miery amin'ny natioran'olombelona hitaona antsika hieboebo. Tsy antsika irery ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy mahatonga antsika ho tsara noho ireo Kristiana izay mbola tsy nahatakatra tsara ny toetoetran'ny fahasoavana, na koa mahatonga antsika ho tsara kokoa noho ireo tsy Kristiana tsy mahalala momba izany. Ny fahatakarana marina ny fahasoavana dia tsy mitarika amin'ny avonavona fa amin'ny fanajana lalina sy ny fanompoana an'Andriamanitra. Indrindra rehefa tsapantsika fa misokatra ho an'ny rehetra ny fahasoavana, tsy ho an'ny Kristiana ankehitriny ihany. Mihatra amin'ny olona rehetra io, na dia tsy fantany aza izany.
Jesosy Kristy dia maty ho antsika fony isika mbola mpanota (Romana 5,8). Maty ho an’izay rehetra velona ankehitriny Izy, ho an’izay rehetra efa maty, ho an’izay mbola ho teraka fa tsy ho antsika ihany, izay antsointsika hoe Kristianina ankehitriny. Izany dia tokony hahatonga antsika hanetry tena sy hankasitraka avy amin’ny fontsika fa tia antsika Andriamanitra, miahy antsika ary mampiseho fahalianana amin’ny tsirairay. Noho izany dia tokony hiandrandra ny andro hiverenan’i Kristy isika ka ho tonga amin’ny fahalalana ny fahasoavana ny olona rehetra.